Реферат - Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии - География, Экономическая география
Реферат: Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии
МОСКОВСКИЙОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(Государственный Университет). __________________________________________________
Анализ рынка углеводородовстран Центральной и Южной Азии.
Специализация: «Развитиеэнергетики и охрана окружающей среды».
член-корреспондент РАН А.А.Макаров
Научный руководитель, к.т.н. В.Л. Лихачёв
<img src="/cache/referats/8868/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">
Анализ изменения структуры мирового рынкауглеводородов (нефти и газа), и место Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) регионана этом рынке.
Анализ возможных подходов к выбору метода решениязадачи.
<span Times New Roman",«serif»">1.1. Анализ изменения структуры мирового рынкауглеводоро­дов, и место Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) региона на этом рынке.
Мировойспрос на первичные энергоно­сители увеличился с 1993 г. к 2000 г. на 17 % (с11470 до 13400 млн. тут). По прогнозам аналитиков эта тенденция сохра­нится и вдальнейшем – с 1993 г. к 2050 г. потребление углеводородов возрастёт более чемв 2 раза.
На долюуглеводородов приходится свыше 62 % добываемых первичных энергоносителей – рассмотримзначение нефти и газа для мировой энергетики более подробно.
Важную рольв мировом топливно-энергетическом балансе играет природный газ. Занимая всего 5% в извлекаемых прогнозных ресурсах ор­ганического топлива планеты, онблагодаря своим высоким качественным характеристикам уже даёт 21 % производимыхв мире первичных энергети­ческих ресурсов и согласно различным прогнозам егодоля возрастёт в ближайшее де­сятилетие до 24-26 %.
Наряду с природнымгазом ожидается рост потребности в нефти. Со­гласно прогнозам IEAвозможно увеличение мирового потребления нефти с 4645млн. тут в 1993 г. на 43 % (до 6650 млн. тут) к 2010 г, при этом доля нефти намировом рынке первичных энергетиче­ских ресурсов снизится с 40,5 % до 39,7 %.
Таблица1.1.1. Мировое производство первичных энергетических ресурсов, млн.тут. / %.
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Энергоносители.
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1993г.
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2000г.
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2010г.
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2050г.
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Производство-всего
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">11470/100
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">13400/100
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">16745/100
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">25900/100
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">В том числе:
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> Нефть
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4645/40,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">5370/40,4
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">6650/39,7
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">7720/30
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> Газ
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2431/21,2
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">2910/21,9
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">3970/23,7
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">7150/28
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> Твёрдые топлива
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">3253/28,4
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">3645/27,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">4580/27,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">5720/22
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> Гидроэнергия
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">291/2,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">345/2,6
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">440/2,6
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">5290/20
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line"> Атомная энергия
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">810/7,1
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">920/6,9
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">965/5,8
Особоеместо на мировом рынке первичных энергоносителей занимают страны ЦЮАз региона –Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия, Иран, Ирак, Турция иПакистан. Хотя в 1998 г. их доля в мировом потреблении первичных энергетическихресурсов составила всего 3,7 %, трудно переоценить влияние политики, проводимойэтими странами, на формирование энергетического рынка не только региона, но ивсего континента в перспективе. Большое влияние исследуемого региона на процессразвития мировой энергетики можно объяснить, приняв во внимание следующие аспекты:
Запасы углеводородов Центральной и Южной Азиипревышают 30 % мировых.
В силу своего географического положения страны регионавыгодно расположены между крупнейшими потребителями углеводородного сырья –Европой и Азией (Китаем, Индией).
США объявило регион «зоной своих жизненных интересов».Многие американские энергетические компании не только изъявили желаниеприсутствовать на рынке Каспия, но и уже сегодня занимаются разработкой егонефтегазовых месторождений.
Таблица1.1.2. Доказанныезапасы углеводородов и их кратность стран Центральной и Южной Азии наконец 1998 г.
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Нефть
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Природный газ
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Тысяч
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Доля мировых
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Кратность
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Млрд. м3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Млн.тонн
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Запасов
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Азербайджан
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,7%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">84,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,85
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,6%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">>100
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Казахстан
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,8%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">42,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1,84
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1,3%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Туркменистан
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,0%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">13,6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2,86
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1,9%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Узбекистан
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,1%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">10,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">1,87
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">34,7
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Иран
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">12,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">8,5%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">65,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">23,00
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15,7%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Ирак
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">10,7%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">3,11
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">2,1%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Пакистан
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">n/a
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:EN-US; layout-grid-mode:line">n/a
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,61
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">0,4%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">38,8
Таблица1.1.3. Добыча, потребление и импорт природного газа странами ЦЮАз региона 1990-1998 гг.,млрд. м3.
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1990
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1991
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1992
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1993
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1994
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1995
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1996
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1997
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; layout-grid-mode:line">1998
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">1998
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Добыча
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">8,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">7,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,9
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Страны
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">7,6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">4,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">75,6 /
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">СНГ
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">81,9
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">78,6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">56,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">60,9
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">33,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">30,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">32,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">16,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">11,7
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">53,5%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">38,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">39,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">39,9
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">42,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">44,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">45,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">45,7
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">47,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">51,1
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Бл.иСр.Вост
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">23,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">25,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">25,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">27,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">31,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">35,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">40,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">47,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">50,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">50,0 / 35,6%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Южная Азия
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">11,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">11,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">11,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">12,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">13,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">14,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15,8 / 11,2%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Сумма по региону
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">170,2
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">170,0
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">147,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">154,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">132,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">136,9
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">145,9
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">139,4
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">141,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">141,4 / 100,0%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Доля мировой добычи
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">8,5%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">8,4%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">7,2%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">7,5%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,3%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,4%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,5%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,2%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Потребление
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">11,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">8,7
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">8,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">12,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">13,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">13,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">10,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">10,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">7,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">7,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">69,0 /
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">10,2
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">10,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">47,1%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">36,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">37,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">37,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">40,7
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">41,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">42,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">43,3
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">45,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Ближ. И Ср.
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Турция
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">3,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">4,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">4,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,5
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,8
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">9,9
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">61,6 /
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">Восток
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">22,7
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">26,6
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">35,0
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">40,1
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">51,7
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">42,0%
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">15,8 / 10,8%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">112,2
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">113,2
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">112,9
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">115,3
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">121,4
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">125,5
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">139,9
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">146,4
<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">146,4 / 100,0%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; color:black;layout-grid-mode:line">Доля мирового потребления
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,7%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,6%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">6,0%
<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;layout-grid-mode:line">5,9%